VT050 - Milina fitsapana fitetezana ho an'ny takelaka - fitiliana fankatoavana avy amin'ny ONU
by Delta Engineering / Alatsinainy, 14 Oktobra 2019 / Published in Fitaovana fitsirihana
VT050 dia milina fitsapana mora, mora ampiasaina ho an'ny mpampiasa, natao araka ny fenitra fiarovana farany.
Natao hiatrika fitsapana plastika plastika, fitoeran-drano, fonosana, sns.
Ny VT050 dia ahitana latabatra fisintahana miakatra izay mety amin'ny karazan'entana vokatra (kitapo, boaty, tavoahangy, sns). Afaka atsangana ho azy eo ambony haavon'ny fihenam-bidy samihafa ilay latabatra ary manomboka mihena izy io mba hamela ilay zavatra hianjera. Izy io dia natao toy izany amin'ny fomba manokatra ny latabatra haingana kokoa noho ny fianjeran'ny vokatra.
Ny rafitra latabatra sy ny rafitra misandratra dia arovana amin'ny fefy metaly izay nosokafana teo amin'ny farany ambany. Misy varavarana omena eo anoloana hiditra ny latabatra amin'ny fampidinana, ny fanitsiana na ny fanadiovana.